Andro Iraisam-pirenena Ho An’ny Tononkalo, Andininy Sasany Avy Ao Am-pon’i Persia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Marsa 2018 17:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, Italiano, Deutsch, বাংলা, русский, 日本語, عربي, English
Ny zavakanto Azerbaijani ao amin'ny tantara Layla sy Majnun avy amin'i Nizami Ganjavi. CC BY 3.0.
Ahoana no mety hamaritan'ny olona ao Tadjikistan, repoblika hany miteny Persiana ao amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha, ny alina mahafinaritra sy velona miaraka amin'ny fianakaviana sy namana?
Angamba izy mety hampiasa ny teny hoe dilafruz, izay midika ara-bakiteny hoe ‘mandoro ny fo’.
Raha toa ka nandany ny alina irery tao anatin'ny fahaketrahana io olona io, mety hoe diltang, izay midika hoe “fahateren'ny fo” ny teny nosafidiana.
Any amin'ny firenena izay mikoriana anaty rà ny tononkalo, ny latsa-pitiavana dia azo lazaina amin'ny fomba am-polony karazany. Ny iray dia azo atao hoe dil bastan (mifamatotra am-po), na manana dil gum zadan -fo mihazakazaka.
Vokatr'izany, ny olona mampiteraka izany toetra izany dia azo antsoina hoe dilrabo (mpangalatra fo), raha toa ny mampangatsiaka fon’ olona antsoina hoe dil khunuk shudan, somary mampihetsi-po rehefa ilaozana
Teny Avy Ao Am-po sy rima!
Ny fiteny Tajik dia mifandray akaiky amin'ny fiteny Indo-Iraniana ampiasaina any Iran (Farsi) sy Afghanistan (Dari). Amin'ny teny Farsi, ny teny literatiora ho an'ny fo dia manakaiky kokoa ny del rehefa tononina. Ny dil an'ny Dari dia tahaka ny an'ny teny Tajik.
Sarintanin'izao tontolo izao namboarin'ny Mani1 mba hanehoana ireo faritra miteny Persiana. Creative Commons.
Tahaka ny Dari sy Farsi, manana solon'anarana, anarana, matoanteny, mpamari-toetra sy andiana fehezantany namboarina manodidina ny teny dil ny Tajik. Tsy tahaka ny any amin'ireo firenena ireo, soratana hoe “дил” ny teny, noho ny alfabeta Sirilika izay mbola ampiasain'ny repoblika Sovietika teo aloha taorian'ny fanovana ny teny Arabo amin'ny teny Latina teo ambanin'ny fitondran'i Stalin.
Ankoatra izany, manerana ny faritra Eoraziatika atsimo izay voalaza etsy ambony, ny dil dia fo mitempo ho an'ny fomban-drazana goavana poetika izay efa hatramin'ny taonarivo voalohany AD farahafahakeliny.
Iray amin'ireo mpanohana malaza io fomban-drazana io i Jalaluddin Rumi, mpahay teny sady filôzôfy tamin'ny taonjato faha-13 ary ankafizin'ny vahoaka miteny Persiana rehetra.
Na inona na inona miafina sy lainga ao am-ponao,
Hitanay rehetra amin'ny masonay tahaka ny andro ireo,
Tsy manana firenena ny fo…
Mora takon'i Nizami Ganjavi, asa soratra mpisaova (barde) tamin'ny taonjato talohany ny haisoratry ny hetsi-po an'i Rumi .
Teraka tao Ganja i Ganjavi (midika ara-bakiteny hoe Nizam an'i Ganja ny anarany) izay anisan'ny Azerbaijan ankehitriny.
Ireto misy andininy tamin'ny tononkalo Khosrow sy Shirin, izay ahitana ny mpitondra Sasaniana (Khosrow) mangata-bady printsesy Armeniana, Shirin amin'ny alalan'ny fifaninanana tononkalo miaraka amin'ny rafiny malalany Farhad.
Nanontaniana: Latsa-pitiavana tamin'ny fo ve ianao?
Valiny: Miresaka momba ny fo ianao, miresaka momba ny fanahy aho.
Nanontaniana: Rahoviana ianao no hanadio ny fonao amin'ny fitiavany?
Valiny: Rehefa any ambanin'ny tany aho.
Nolazaina: Esory ao am-ponao ny fitiavan'i Shirin!
Nanontaniana: Ahoana no hiainako raha tsy eo ny fanahy malalako?
Tsangambato Rudaki ao Tajikistan. Creative Commons Sary Flickr avy amin'i Julian Galbert.
Miverina lavidavitra kokoa (858-941 TK), misy an'i Rudaki avy ao Panjikent (Tajikistan ankehitriny), izay heverin'ny sasany ho Ray mpiahy ny tononkalo Persiana.
Naka ny faharetana sy ny fo taty amiko ny fitiavanao,
Ny tarehinao tsara tarehy no nanosika ny saiko sy ny foko ho variana.
Ny alahelo ao am-poko dia toy ny tendrombohitra iray,
Tahaka ny vato ny fo anananao eo ambanin'ny tratra.
Amin'ny taonjato faha-21, nitarika ny fitomboan'ny isan'ny tononkalo Persiana nivoaka ny aterineto sy tambajotra sosialy.
Firdaws Azam, poeta Tajik amin'ny taonjato faha-21, matetika mampiasa Facebook ho sehatra handefasana stanzas tahaka ireto:
Indray andro any, ho very ao anatin'ny fahatsiarovana ny tenako,
Mitady fò ao anatin'ny fahatsiarovana, malala
Nanapaka ny foko tamin'ny lohataona tsy araka ny sitra-poko aho,
Satria, nametaka ahy tamin'ny fararano mangatsiaka (izy ireo).
Tratra ny Andro Manerantany Ho An'ny Tononkalo!
Tamin'ny taona 1999, nanapa-kevitra ny Firenena Mikambana fa atao Andro Manerantany ho an'ny Tononkalo ny 21 Martsa, daty izay manamarika ny fankalazana ny Miraalina Lohataona manerana an'i Eorazia.
Sarotra ny hieritreritra fa fifanojoana ny fanapahan-keviny, ary fanalahidy iray amin'ny hevitry ny Firenena Mikambana ny andro ONU nanehoan'ny Tale Jeneralin'ny UNESCO teo aloha, Irina Bokova tamin'ny taona 2010 ny heviny fa “ampidirin'ny poezia ao aminy ny vaikam-pamoronan'ny kolotsaina, satria azo havaozina tsy tapaka izany.”
Ho an'ireo mpikambana ao amin'ny tontolo miteny Persiana, iray amin'ireo daty manan-danja indrindra amin'ny taona ny Nowruz. Ankasitrahana ihany koa ny zava-misy fa ny fomban-drazana poetika izay nandraisany anjara betsaka dia mahatsapa fanoharana lalina kokoa. Araka ny filazan'ny iray hoe, “mahita ny lalany mankany am-po iray ny fo”.
Zeorzia 2 herinandro izay